NAIROBI, Kenya - Xiisad diblomaasiyaadeed oo cusub ayaa ka dhex qaraxday Somalia iyo Kenya kadib markii Xukuumadda Nairobi dib ugu yeertay safiirkii u fadhiyay Muqdisho, Lucas Tumbo.
Dowladda Kenya ayaa ka dalbatey Safiirka Somalia ee Nairobi, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan inuu si deg deg ah dalkeeda uga baxo, waxaana go'aankan ay kasoo saarey qoraal ka kooban 15 qodob, kaasoo nuqul kamida lasoo gaarsiiyay Garowe Online.
Qoraalkan oo kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu sheegay in sababta safiirka loogu yeeray ay ka dhalatay go'aankii dowladda Federaalka ah ee Somalia ay ku xaraashtay Shirkii London, 7-adii bishan xirmooyin shidaal oo ku yaalla xuduud badeeda labada dal ay ku muransan yihiin.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan indhaha ka laaban doonin tallaabada gardarada ay ku tilmaantay, ee loogu soo xad-gudbay kheyraadka dalkeeda, shidaalka ku jira xuduud badeeda ay la wadaagto Somalia, taasoo murankeeda wali heshiis laga gaarin.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Kenya ay ka xuntahay ficilka dowladda Federaalka ah ee Somalia, kaasoo dhaawacay xiriirka wanaagsan ee walaal-tinimada ku dhisan, ee u dhaxeeyay labada dalka, oo mudo nus qarni [50 sano] soo jiray.
Kenya ayaa daboolka ka qaadey in warqad ashtako ah oo ku saabsan Shirkii London ee lagu soo bandhigay xogta shidaalka Somalia u gudbisay Safiir Tarsan, sidoo kalena safiirkeeda Muqdisho u gudbiyay madaxda sare ee Villa Somalia, balse la iska-indha-tiray.
Shirkii Shidaalka London oo ay soo qaban-qaabisay Shirkadda Spectrum oo xog-aruurin ku sameysay goobo loo maleynayo inuu Shidaal ku jiro xeebaha Somalia ayaa qarxiyay xiisadda diblomaasiyasadeed ee Kenya iyo dowladda Federaalka.
Shirka waxaa ka qeybgalay in ka badan 60 Shirkad oo ajnabi ah, oo daneynaya inay maal-gashi ku sameystaan Shidaalka Somalia, iyadoo dowladda Federaalka lagu eedeeyay inay ka iibisay shatiyo xilli dalka aaney ka jirin sharciga batroolka sidoo kalena khilaaf qeybsiga kheyraadka uu kala dhaxeeyo Maamul Goboleedyada.
Labada dal ayaa dacwad ku saabsan muranka xuduud badeedka ka taalla Maxkamadda "International Court of Justice" (ICJ) taasoo ay gudbisay dowladda Federaalka, iyadoo Kenya doonaysay in qaab wadahadal hoose ah lagu dhameeyo arintan.
Kenya ayaa kamid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Somalia, kuwaasoo qeyb ka ah AMISOM, waxaana dalka uu martigelinayaa boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah tan iyo 1991.
HALKAN KA AKHRI 15-KA QODOB EE KASOO BAXAY KENYA:
Kenya ayaa kamid ah dalalka sida toos ah ugu lugta leh Siyaasadda Soomaaliya, waxaana ay...
Afrika 18.05.2018. 22:27